New Year ဟော အကာလိကော | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » New Year ဟော အကာလိကော
New Year ဟော အကာလိကော
Posted by ဦးေၾကာင္ၾကီး on Apr 18, 2013 in Buddhism, Community & Society | 19 comments
လူဆိုတာ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ အသက်ရှင်တာဗျ၊ အဲဒီစကား သိပ်မှန်တယ်။ ဘာလုပ်လုပ် တခုခုဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ (သိစိတ် Conscious ဖြစ်စေ မသိစိတ် Unconscious ဖြစ်စေ) လုပ်ကြတာ။ ဖြစ်တန်စွမ်း Probability ဒါမှမဟုတ် ယုတ္တိဆန်တဲ့ ယုံကြည်မှု သိပ်အရေးကြီးတယ်။ ထီထိုးတာပဲကြည့်..၊ ပေါက်ဂဏန်း များလျင်များ ဆုကြေးလျင်ကြီး ဒါမှဈေးကွက်ဝင်တယ်၊ တခါတလေလဲ သိပ်ပြင်းပြတဲ့ အာသီသ အစားသွင်း လုပ်ကြတာလဲ ရှိတယ်။ နောင်ရိုးတိုက်ပွဲမှာ ဘုရင့်နောင် မြစ်ကူး လှေ၊ဖောင်တွေဖျက်ပြီး အသေခံတိုက်ခိုင်းတာ ဥပမာဗျာ..။ အဲလိုမဟုတ်ဆိုရင် လုပ်မည့်သူမရှိတော့.. လုပ်လည်း စိတ်ထက်သန်မှုမဲ့လို့ စစ်မရောက်ခင် မြှားကုန်သွားပြီ။ မဖြစ်နိုင်တာကြီး ဇွတ်ယုံနေရင် ရမလားဆို၊ ဘယ်ရမလဲနော် သို့သော် လူမှန်ရင် ဘုရားဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ထုံး နှလုံးမူပြီး မဖြစ်နိုင်တာ မရှိ nothing impossible စိတ်ခွန်အား မြှင့်တင်ရေး ရှုဒေါင့်ကနေ ပြောတာပါ။
ဘယ်ကစမလဲ… ယုံကြည်မှုကနေစပါ။ (လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲနိုင်သည်) လွတ်လပ်တဲ့ လူတယောက်အတွက် ယုံကြည်ချက်ရှိမှ အရာတခုခုကို လုပ်ဆောင်ဖို့ ဖြစ်နိုင်တယ်။ မိဘအတင်းခိုင်းလို့ ဆရာဝန်လိုင်းလိုက်ရတောင် ဆေးသိပ္ပံပညာအပေါ် လက်ခံနိုင်ရမယ်လေ၊ အဲလိုကြေးဆို စိတ်ဖောက်ပြန်မနေတဲ့ လူတိုင်းသည် တခုခုအပေါ် ဖြစ်တယ်၊ ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မျှော်လင့်ချက် ရှိထားတယ်။ ယုတ်စွအဆုံး ခြေလက်အင်္ဂါတွေ နေ့စဉ်ဓူဝ သုံးတာတောင် တခုခုပြီးမြောက်တယ် ထင်လို့လုပ်တာ မဟုတ်ဘူးလား။ ခြေနဲ့လျောက်လို့ ခရီးပေါက်တယ်..
အဲလိုမဖြစ်ထင်ရင် ကင်းမီးကောက်ထောင်သွား၊ တုံးလုံးလှဲသွားဖို့လည်း ကြံစည်ကြမှာပေါ့။ သိပ်အခြေခံကျကျ ပြောတာပါ။ အားအားယားယား ကိုယ့်အသားကိုယ် ဘယ်သူမှ ကုတ်ဖဲ့မနေဘူး၊ ယားမှကုတ်တယ်၊ ကုတ်ရင် အယားပြေတယ် ထင်တာကိုး..။ ဒါဆို ရုပ်ပိုင်းပျက်ဆီးမှု တကယ်ဖြစ်မနေဘူးလား စောဒကတက်ချင်တက်မယ်၊ ဖြစ်နေပါတယ်၊ ဖြစ်နေလို့လည်း ရုပ်နာမ်ဖြစ်ပျက် ဘုရားအဟော ရှိထားတာပေါ့နော်။ သို့သော် အဲဒီအယား သတ်မှတ်ချက်သည် လူတဦးခြင်းစီနဲ့ ဆိုင်တယ်။ ရုပ်ကလပ်စည်း ဖောက်ပြန်ပေမဲ့ စိတ်ပိုင်းလက်ခံ တုံ့ပြန်ပုံ မတူဘူး။ အဆင့်မြင့်သွားရင်တော့ ရုပ်၊နာမ် အပြန်အလှန် သက်ရောက်ခြင်း သဘောရှိလို့ ပုထုဇဉ်မှာဖြစ်တဲ့ ရုပ်ပိုင်းသွေးသား ဖောက်ပြန်မှု ငြိမ်းသွားပါပြီ။ (ဥပမာ – မဂ်ညဏ်မပြောနဲ့ သမထလွန်ပြီး ကာမကိလေသာဆန္ဒ လပိုင်း၊နှစ်ပိုင်း ချုပ်သလိုဖြစ်တာ များစွာရှိတယ်) ကြုံလို့ပြောတာပါ၊ ဟိုးတလောက ပစ္စုပ္ပန်ရုပ်ဝါဒီတဦးပြောတဲ့ ရဟနာ္တရော ကာမအားတိုးဆေးကျွေးရင် ခံနိုင်ရည် ရှိပါ့မလားဆိုတာ အမှတ်ရလို့။
ရေးရင်းနဲ့ စာရှည်သွားပြီ၊ နှစ်ကူးလက်ဆောင် ပေးချင်တာ ဓမ္မစကားပါ။ ဓမ္မမှ ပရမတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ပညတ်စကား အနှစ်သာရ၊ သေချာနားထောင်…။ ကျုပ်တို့ နုဿတိဘာဝနာ တခုခုကို ပုတီးစိပ်လို့ဖြစ်စေ လက်လွတ်ဖြစ်စေ ပွားလေ့ရှိတယ်၊ အများဆုံးက ဗုဒ္ဓနုဿတိပေါ့ဗျာ…။ ဝိပဿနာ ရှုတယ်ဆိုလည်း ကနဦးအစ သမထအာရုံ ယူလိုက်တာပဲ။ နောက်မှ ကိုယ်သန်ရာ တရားဆင်ခြင်မှု အားထုတ်တယ်။ ဓမ္မရှုဒေါင့် သက်သက် ပြောရင်တော့ အာသဝေါမကုန် ရဟနာ္တ မဖြစ်သ၍ တခုခု အကိုင်စွဲ ပြုထားရတယ်။ ဒီတော့ နှစ်သစ် သမထ၊ဝိပဿနာ အစွဲ တခု လုပ်ကြရအောင်။
အကျင့်မရှိရင် နည်းနည်း ခက်ချင်ခက်မယ်။ ဝိပဿနာ အားသန်သူ၊ အခြေခံရှိသူများအတွက် ဓမ္မဂုဏ်တော် ခြောက်ပါးထဲက အကာလိကော ဓမ္မာနုဿတိပါ။ အချိန်အခါမလပ် အကျိုးပေးသော အဓိပါယ် ထွက်ပါတယ်။ “အကာလိကော ဓမ္မော” ကို အရဟံဂုဏ်တော်လို ပုတီးစိပ်၊ စိတ်မှာရေရွတ်ရင်း ကာလသုံးပါးလွတ်မြောက်မှု ဝိမုတ္တိစိတ် နှလုံးသွင်းတတ်ရင် သမထ၊ ဝိပဿနာ နှစ်ပါးစလုံး မြောက်နိုင်တယ်။ အခါမရွေး အကျိုးပေးတယ် ဆိုမှတော့ အတိတ်၊ အနာဂတ်၊ ပစ္စုပ္ပန် ကာလသုံးပါး အယူ မယူတဲ့ သဘောပဲ။ အရေးကြီးတာ ဆင်ခြင်နေတဲ့ ပစ္စုပ္ပန်စိတ်ကို အတည်မယူဖို့၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပစ္စုပ္ပန် အရှိယူရင် အတိတ် အနာဂတ်ကိုလည်း ဖယ်မရဘူး။ ကာလသုံးပါး အယူထဲ ပြန်ပိတ်မိသွားတယ်။ အဲဒီမှာ အကာလိကော ဓမ္မဂုဏ်တော်ကို အားဆေးအဖြစ်သုံးမယ်။ ဖြစ်မှဖြစ်ပါ့မလား၊ ဘယ်လောက်ကျင့်ရမှာလဲ မတွေးနဲ့.. အခုလုပ် အခုဖြစ်တယ်။ ဖြစ်တယ်ပျက်တယ်အစား အခုမရှိသလို အရင်လည်း မရှိ၊ အနာဂတ်မှာလည်း မရှိဘူး။ အခုရှိတာ အရင် အရှိယူလို့ နောင်လည်းရှိနေတာ။ ဒါဆို သုညတသဘော ယုတ္တိဆန်မှန်း လက်ခံလာမယ်။
သီအိုရီပိုင်း ကြေညက်တာ မမှားပေမဲ့ အလုပ်ပိုင်း ရောက်တဲ့အခါ အတွေး စွန့်လိုက်ပါ။ လက်ရှိကို တွေးတော ဆင်ခြင်မှု အတတ်နိုင်ဆုံး ကင်းရမယ်။ ဂုဏ်တော်ပွားလို့ သမာဓိဖြစ်ရင် အကာလိကော အနက် ခဏမဆိုင်း လက်ငင်း မဂ်ဖိုလ် အကျိုးထူးပေးတယ် အသိပြောင်းယူပြီး အတိတ်၊ အနာဂတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်ကာလ သုံးပါးစလုံး ဖြတ်ချလိုက်…..။ ငါ အခုတရား မှတ်နေလို့ တရားရတော့မှာလား (ပစ္စုပ္ပန်)၊ မှတ်တာနာရီဝက်ရှိလို့ (အတိတ်) နောက်နာရီဝက် (အနာဂတ်) ကြာရင်တော်ပြီ မသိနဲ့။ တရားရဖို့လဲ မဟုတ် တရား မရမှာလည်း မပူ၊ အနတ္တ မမျှော်ဘဲ အတ္တစွန့်လိုက်တဲ့သဘော ကြိုးစားယူတာ။ ဓမ္မသဘော မပါဘဲ ကာလသုံးပါး စွန့်တာကို အတည်ယူ ဆုပ်ကိုင်ရင်တော့ မထူးဘူး။ ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ စွန့်ခြင်း ကွဲပြားရမယ်၊ ညဏ်မပါဘဲ စွန့်နေလို့ကတော့ စွန့်ခြင်း ပြုလုပ်နေတာပဲ။ တကယ် လုပ်ရမှာ ပြုလုပ်ခြင်း စွန့်ရမှာ။ အလယ်တန်း သချာင်္က ယူနီယံ U နဲ့ အင်တာဆက် n ကိုမြင်ကြည့်ပါ။ အင်တာဆက်ထဲ ယူနီယံ မပါဘူး၊ ယူနီယံထဲမှာပဲ အင်တာဆက် ပါတယ်။
အတည်ယူ စွဲမှတ်ခြင်း သမာဓိမှ သုညတသဘောသို့ ပြောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သမာဓိသက်သက်နဲ့ မတူတဲ့ အသိပြောင်းလာတိုင်း ဆုပ်ကိုင်မထားဘဲ အကာလိကော ဂုဏ်တော် ယုံကြည်မှုသဒ္ဓါစိတ်နဲ့ ရှိသမျှအား ပုံအော သုံးတဲ့နည်းလို့ ပြောပါရစေ။ ပြုလုပ်မှုနဲ့ စွန့်လွှတ်မှု ကွဲပြားလာသလောက် ညဏ်အလင်း ပွင့်ပါမယ်။ သုညတ ပရမတ်သဘောကို လက်ခံနိုင်လာမယ်၊ စွန့်လွှတ်ခြင်းကပေးတဲ့ အကန့်သတ်မဲ့ စွမ်းအား နားလည်လာမယ်။ ဓမ္မအသိမှနေ ရတနာသုံးပါး ဂုဏ်တော် ကြည်ညို အာရုံပြု တတ်လာမယ်။ ပညတ်သုံးသုံး ပရမတ်ရှုရှု၊ လောကီ လောကုတ် အသုံးတဲ့ကြောင်း သိလာမယ်။ ချမ်းသာအစစ် မရသေးတောင် ဘာကို ချမ်းသာအစစ်ခေါ်တယ်၊ ဘာကြောင့် ချမ်းသာအစစ် ရထိုက်တယ် မြင်လာမယ်….။ ချမ်းသာဖို့ လွတ်မြောက်ရမယ်၊ လွတ်မြောက်ဖို့ စွန့်လွှတ်ခြင်း လက်ခံလာမယ်။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာသည် ကိုးကွယ်ရာ၊ မိမိကိုယ်သာ အားထားရာဆိုတာ ယုံကြည်လာပါမယ်။ အဲဒါ မိမိကိုယ်တွင်း သရဏဂုံအစစ် ဆောက်တည် ဘုရားတည် သာသနာပြုခြင်းပါပဲ…..။ နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာအပေါင်း ခညောင်းကြပါစေ..။
စရာတော် ဦးကြောင်ကြီး J
ဂလိုဆိုပြန်တော့လည်း ဂဇက်ထဲမှာ တွေ့ရာကောင်မလေးတွေကို ခြစ်ချင်တဲ့ ကိုကြောင်ကြီးမဟုတ်တော့ပဲ…
သူ့ပါပါ ဓမ္မကထိက ကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ ဦးကျောင်ဂျီးပဲ ရေးထားသလိုလို….
သာဓု သာဓု နှစ်ခါခေါ်သွားပါတယ်… နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာအပေါင်း ခညောင်းပါစေ..
ဦးမာဃ ပြောတာလဲ ဟုတ်တော့ ဟုတ်တုတ်တုတ်ပဲဗျ။ နည်းနည်းတော့ လည်နေသားပဲ ကိုကြောင်ကြီးရေ။ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုသွားပါသည်။ အမှန်တော့ ဒါမျိုးက တရားကို အကာလိကော ဂုဏ်တော်နဲ့ ညီအောင် ဟောနိုင်တဲ့ ကျုပ်မိတ်ဆွေ မိုးပြာဆရာတွေနဲ့ ဆွေးနွေးမှကောင်းတာမျိုး။
ဓမ္မစကား ကိုတော့ မနောက်ဝန့်ပါဘူး
ထောက်ဘာဒယ် .. ထောက်ဘာဒယ် ..
ဒက်ဒီကြောင် ကို ထောက်ဘာဒယ် ..
လူ တစ်ယောက် စိတ်ဓါတ် မြှင့်တင်ဖို့အတွက်ဆို
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ရှိအောင် အရင် လုပ်ရမှာပါ …
ပါဠိလိုတော့ အဓိဋ္ဌာန် လို့ ခေါ်ရမလား ..
သန္နိဋ္ဌာန် လို့ ခေါ်ရမလား .. သေချာ မသိဘူး …
တောစပ် ရောက်မှ အိမ်က မိန်းမ သတိရတာနဲ့
မောင်ကြီးကို တစ္ဆေကိုက်လိမ့်မယ်ကွဲ့ မင်း လိုက်ခဲ့ဦး … ဆိုဒဲ့ စိတ်ဓါတ်မျိုးနဲ့တော့ ..
ဘယ်လိုမှ ဖြစ်မှာ မဟုတ်လောက်ဘူး …
ဟုတ်လား မဟုတ်လားတော့ မသိဘူး …
ပွားဂျင်ဒါ ဝင်ပွားတွားဒယ် .. ဒါဘာဗျဲ …
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ယုံကြည်မှု ပြင်းထန်လွန်းတဲ့အချိန် ၊ အဲဒီ ယုံကြည်မှု က ပြန်ပြီး အကျိုးပေးတယ် ဆိုတာ နေရာတိုင်းလိုလိုမှာ တွေ ့နိုင်ပါတယ် ။
ဥမပါ (၁)။ ။ တိုင်းရင်းဆေး တစ်မျိုးမျိုး ကို ၉၆ပါးသောရောဂါစုံကို အမှန်တကယ်ပျောက်ကင်းသက်သာ မယ်လို ့ယုံကြည်ပြီး စွဲစွဲမြဲမြဲ သောက်သုံးရာမှ ၊ ခံစားနေရသော ဝေဒနာများ ပျောက်ကင်းသက်သာသွားခြင်း။
ဥမပါ(၂) ။ ။ ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီးနှင့် အေဘီစီ ဘီယာ သည် ယောက်ျားအားကို လွန်စွာတိုးပွားစေသည်ဟု ယုံကြည်ချက်ဖြင့် စရာတော်ကြောင်ကြီး ပုံမှန်သုံးစွဲကာ ဟိုဒီသွားခြင်း ။
ပူးပြီးကပ်ထားမှ. ကဆိုတာဖြစ်လာတယ်..။ ပက်လက်လန်ဠိုက်ရင်..ယဆိုပြီးဖြစ်သွားပေမယ့်.. မမှန်ဘူး..
အချိန်အခါကြည့်ပြီး.. ဖတ်နေတဲ့သူကဇောက်ထိုးဖတ်သလား.. တည့်တည့်ဖတ်သလားကြည့်ပြီးမှာ..ကနဲ့ယကို.. အမှန်ရေးခြစ်ရတယ်..။
ကဆိုတိုင်းလည်း.. ပရမတ်သဘောမှတ်ပြီး.. ထိုင်နေရတာမဟုတ်သလို.. ပညတ်သဘောနဲ့..ထကရတာလည်းမဟုတ်ဖူး..
ဒါကိုပဲ ဗမာစာမတတ်တဲ့သူတွေဖတ်ရင်.. ကုံးနေတဲ့ဖင်လုံးလေးလိုမြင်ချင်.. မြင်ပေမပေါ့..
ဒါပေမယ့်.. ကဟာကပဲဖြစ်ပြီး.. ပညတ်သဘောအရ.. ဘာမှမရှိတာဖြစ်တယ်..
ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ စွန့်ခြင်း ကွဲပြားရမယ်၊ ညဏ်မပါဘဲ စွန့်နေလို့ကတော့ စွန့်ခြင်း ပြုလုပ်နေတာပဲ။ တကယ် လုပ်ရမှာ ပြုလုပ်ခြင်း စွန့်ရမှာ။ အလယ်တန်း သချာင်္က ၁ကို ဘေးလှည့်လိုက်တဲ့.. ပ နဲ့ ငကိုလှည့်လိုက်တဲ့.. ဂကိုလည်းမြင်ကြည့်ပါ။ ကထဲ.. ငမပါဘူး..။ ဒါပေမယ့်.. ငထဲကကပါတယ်..
အဲလိုတွေရှင်းနေတာကိုရှုပ်အောင်လုပ်ပြီး.. ပြန်ရှင်းပြမှ. ဓမ္မကွထိကလို့ခေါ်တယ်..
တရားသိတဲ့သူ..နတ်ပြည်ရောက်မယ်..။ ငါ့စော်ကားတဲ့သူ… တရားကိုစော်ကားတာမို့.. ငရဲပြည်ရောက်မယ်..
( မှတ်ချက်..။ နောက်ပြီးအတည်ပြောတာမဟုတ်ဖူးဆိုတာ.. ဟုတ်ပါတယ်လို့.. မပြောလိုပါ)
တရားဂုဏ်တော် (၆) ပါး
သွာက္ခာတော ဘဂဝတော ဓမ္မော၊ သန္နိဋ္ဌိကော၊ အကာလိကော၊ ဧဟိပဿိကော၊ ဩပနေယျိကော၊ ပစ္စတ္တံ ဝေဒိတဗ္ဗော ဝိညူဟိ။
တကယ်တော့.. အူးကြောင်ကြီးက ပျော်ပျော်နေတတ်ပေမဲ့..
သူတော်ကောင်းကြီးပါဗျာ.. ဂေဇက်မှာ ပါရမီလာဖြည့်နေတာပါ။
အူးကြောင်ကြီးကို နှစ်ဟောင်းမှာ ပြောမှားဆိုးမိ ချိပါက ခွေ့လွှတ်ပေးဘာ။
တာဝတိန်သာရောက်လည်း ကိုရင့်ဖို့ နတ်သမီးလေး ၅ယောက်လောက်
ပတီးတော့မစိတ်ဖြစ်ပေမဲ့ ပဌာန်းကို နေ့တိုင်းရွတ်ဖြစ်တာ ၆ လကျော်လောက်ရှိပြီ…
သတိထားမိတာတော့ စိတ်အာရုံစိုက်ရင်စိုက်သလို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိလာတာပါ…
ဘွားဒေါ်စုကို ဝိုင်း Vote ကြတာကော အကာလိကောပဲလားဟင်..
ဝိမုတ္တိစိတ် နှလုံးသွင်းတတ်ရင် သမထ၊ ဝိပဿနာ နှစ်ပါးစလုံး မြောက်နိုင်တယ်။ လို့ ဘယ်တရားမှာ
ပြောတာတုန်း ဦးကြောင်ကြီးရဲ့။ အရိယာ မြောက်မှာ မဟုတ်ဘူးလားဗျ။ တရားရဲ့ အရည်အချင်းတစ်ခု
ကို ပွားဖို့ ဂေဇက်က လူတွေကိုပြောနေတာလား။ ကျွန်တော်သိတဲ့ ပွားတာက အဲလို မဟုတ်။ တရား
ဟောဆရာ တစ်ယောက်ယောက်က တရားစကားလေးပြောရင် သူ့စကားက အကာလိကော ဂုဏ်နဲ့
ညီသလား.ညီရင် တခြား ဂုဏ်တော်အားလုံးနဲ့ကောညီသလား။ မညီရင် ဘုရားဟော မဟုတ်လို့
ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဘဲ။ အဲလို ကိုယ့်အမြင်အတ်ိုင်းတွေးတာ ကိုပဲ ပွားတာလို့ ပြောရမှာ။
တရားဂုဏ်တော်ကို တရားစကားပြောသူတွေ ပွားကြပါစေ။
ဆေးထိုးအပ်သုံးတိုင်း ဆရာဝံနဲ့ဘိန်းစား တူတယ်ပေါ့… ဒါဆို ရွာထဲက ဘစအောင်ပုနဲ့ အင်္ဂလံပျံ ဒေါက်တာပဒုမ္မာ အတူတူပဲလား..။
အရိယာဆိုတာ ညဏ်ဖြစ်တည်တာခေါ်တာ..။ နှလုံးသွင်းတတ်တိုင်း အရိယာဖြစ်ပါ့မလား..။ အရိယာသည် ပြုလုပ်ခြင်း အဆင့်လိုက် စွန့်ပြီးသူ၊ ပုထုဇဉ် သီလ သမာဓိ မြဲသူကတော့ စွန့်ခြင်း ပြုလုပ်ထားသူ.. သံသရာပြတ်ပုံခြင်းကွာတယ်။ ဗျားတို့ ပစ္စုပ္ပန်သမားတွေ အဟုတ်ထင် ဆိုင်ကိုင်မှုနဲ့ တဘဝတနပ်စာ ယှဉ်လို့ရကောင်းရမယ်။ ဖြစ်လာတဲ့ ကိလေသာကို အားကောင်းတဲ့ အသိနဲ့ ဖုံးအုပ်တာနဲ့ ဖြစ်စရာမရှိလို့ မဖြစ်တော့တာ တူနိုင်ရိုးလားဗျာ…။
ဦးကြောင်ကြီးပိုစ့်ကို ဝင်နောက်မလို့ဝင်လာတာ အတည်ကြီးတရားဟောတွားတော့ ဘယ်လိုပြောရမှန်း မသိဘူးဖြစ်တွားဒယ်။ သဂျန်တွင်း ဦးကြောင် ဘုန်းကြီးဝတ်နေတာကိုး။ ပါရမီရင့်သန်လေတော့ ရက်ပိုင်း အတွင်း တရားထူးရသွားထင်ပါ့။ သာဓု သာဓု သာဓု။
ကိုကြောင်ကြီးရဲ့ နှစ်သစ်လက်ဆောင်ကို ကျေးဇူးတင်စွာ ယူသွားပါတယ်။
ဂုဏ်တော်ကိုပွားများတယ်ဆိုတာ ပညတ်ကိုအရှုခံထားတာမို့လို့ သမထပဲ ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလား..
ဝိပဿနာက ပရမတ်ကို ရှုတာလေ… ပညတ်ကို ရှုရုံနဲ့ ခန္ဓာငါးပါးရုပ်နာမ်နှစ်ပါးရဲ့ ဖြစ်ပျက်ကို မမြင်နိုင်ဘူးမဟုတ်ဘူးလား…